Flim2MM: Shattered (2007)
ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်သူတွေကတော့ နာမည်ကြီးမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Pierce Brosnan (ဂျိမ်းစ်ဘွန်း မင်းသားဟောင်း၊ Gerard Butler (300, Olymps Has Fallen မင်းသား) တို့ပါဝင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတကားဖြစ်တဲ့အတွက် ပိတ်သတ်ကြီး စိတ်ဝင်စားမှာပါ။
ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်သူကတော့ Nay Win ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ အညွှန်းကို ပြောလိုက်ရင် spoiler ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ မရေးတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူရေးထားတဲ့ အညွှန်းလောက်ပဲဖတ်ပြီး ဇာတ်ကားကိုကြည့်ရင် ပိုအရသာရှိမှာပါလို့ ထပ်မံညွှန်းလိုက်ပါရစေ။
ရုပ်ရှင်အညွှန်းတော့ မပြောပြချင်တော့ပါဘူး ။ အညွှန်းပြောပြမိလို့ သိသွားရင် ကြည့်လို့ကောင်းတော့မယ့် အမျိုးအစားတော့ မဟုတ်ဘူး ။
အာင်မြင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းမိသားစု တစ်စုရှိတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူတို့ရဲ့ သမီးကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး အကြပ်ကိုင် ခိုင်းစေခြင်းကို ခံရတယ် ။ ခိုင်းစေမှု အားလုံး ချောချောမွှေ့မွှေ့ လုပ်နိုင်မလား ၊ မလုပ်နိုင်မလား ဆိုတာတော့ ...... အဲဒိထက်ပိုညွှန်းရင် ဖီးလ်ပျက်သွားမယ် 😁 😁
ဒီလိုရုပ်ရှင်လေး ကြည့်ချင်ကြမလား မသိဘူး ။
ဘာသာပြန်ရင်း ကြည့်ရင်းကနေ သူ့နေရာမှာ ကိုယ်သာဆိုရင် ဆိုပြီး ဒေါသဖြစ်တယ် ၊ တစ်ဘက်ကလည်း သူ့နေရာမှာ ကိုယ်သာဆိုရင် ဆိုပြီး ကြောက်လာတယ် ။ အိမ်ထောင်သည် ယောက်ျားတွေ ပိုကြည့်သင့်ပါတယ် ။
[FORMAT]:………………………….:[ 720p HDRip x264 MP4
[GENRE]:………………………… .:[ Crime, Drama
[FILE SIZE]:……………………….:[ 696 MB
[RESOLUTION]:………………….:[ 1280 x 720
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[1h 35mins
[Translate By]:……………………..:[ Nay Win
Posted by Y Junction at 3:26:00 AM
Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon (2013)...